Libido-Balancing ဖြည့်စွက်ချက်များ - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်
မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆရာဝန်များမဟုတ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များသည် site site မှလာသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်မကြိုးစားမီသင့်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်စစ်ဆေးသင့်သည်။ သင်သည်အခြားအဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောချဉ်းကပ်နည်းကိုသင်ဖွင့်ပါကဤဆောင်းပါး၏အောက်ရှိလင့်ခ်တွင် homeopathy အကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့သဘာဝဆက်ရေးဖို့ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပြန်လာ၏ဖြစ်စဉ်ကိုခွင့်ပြုပါရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုပိုမိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ နားလည် ကျေးဇူးပြု. - စွဲလမ်းမှုသည် dopamine နှင့် dopamine D2 receptors များကိုလျှော့ချခြင်းထက်များစွာပိုသည်။ သငျသညျဟိုစတီရွိုက်ကိုယူပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်း, ကြည့်ရှု ဒီပစ္စည်း။
အိုမီဂါ ၃ ဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်သောအခါ ဦး နှောက်၏လည်ပတ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း (သိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီနှင့်သုတေသနနောက်ကွယ်ရှိခြင်း) နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းသတင်းများကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့အဆီတွေဟာ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးအရေးကြီးပုံရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကူညီဖို့ငါအစားအစာထဲမှာထည့်တဲ့ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးနေသောပြproblemsနာများသည်လိင်အင်္ဂါမဟုတ်ဘဲ ဦး နှောက်မှဖြစ်သည်။ အအေးခံသည့်အဆီများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆန်သည်လတ်ဆတ်လျှင်မဟုတ်လျှင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်တိုင်းစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်တိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ထိုသို့လက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ လူတွေအများအပြားမဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းရှိသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်: ကော်ဖီ, ကိုကာကိုလာ, ရင်စိတ်ဖိစီးမှု, အားကစားနှင့် fapping ။ ဒီတစ်ခါလည်း Nofappers အများကြီးအချို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်တာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်! ကိုယ့်အကြောင်းမှာ google အပေါ်အချို့သောသုတေသနပြုပါ! အသက် ၃၂ ​​- ပြင်းထန်သော ED ကုသခြင်း၊
ဖြည့်စွက်ချက်များကကူညီသည်။ အထူးသဖြင့်ပထမလမှာမအိပ်မီမဂ္ဂနီဆီယမ် citrate 200-400 mg ကိုသောက်ဖို့ကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ လူအများစုကအဲဒါကိုမလုံလောက်ဘူး၊ ဒါကစူပါအပန်းဖြေမှုပါ၊ အိပ်ရေးဝဝလွန်စွာကူညီပေးတယ်။ Melatonin ကဲ့သို့သောအခြားအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်မည်သည့်သဘောဖြင့်စွဲလမ်းပုံမပေါ်ပါ။ သငျသညျကိုစိုးရိမ်လျှင်, အိပ်ရာမတိုင်မီမှောင်မိုက်အရွက်အစိမ်းရောင်၏ကြီးမားသောအသုပ်ကိုစားပါ။ သင်သည်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်မဂ္ဂနီစီယမ် ၂၀၀-၄၀၀ မီလီဂရမ်ထက်များစွာပိုသောလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်နိုင်သည် (သို့သော်သင်၏အစိမ်းရောင်များကိုဖြည့်စွက် boiz နှင့် gurlz ဖြင့်မအစားထိုးပါ။ ၄ င်းတို့ကိုအကြောင်းပြချက်များဖြင့်အစားအစာများမဟုတ်ဘဲဖြည့်စွက်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ) အသက် ၁၉ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများစွာစွာရရှိပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကူးယူပြန်သည်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာလူတချို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗီတာမင်တွေကျိန်ဆိုတယ်။ သူတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့ကိုမသုံးအကြားခြားနားချက်, ငါ့အဘို့, ကြီးမားသည်။ ဗီတာမင်များသောက်သုံးပြီးနောက်စိတ်အားထက်သန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ပုံမှန်ထက်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။ ငါယူသည်:
တစ်နေ့လျှင် Omega2500mg တစ်နေ့လျှင်ဆေးတောင့်3တောင့်1တစ်နေ့လျှင်အသည်းရေနံဆေးတောင့်2တစ်နေ့လျှင် Gluconate ဆေးပြားနှင့်အတူသွပ်4သုံးလတစ်ကြိမ်ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်ဗီတာမင် D ဆေးပြားဒီဆေးဟာကျွန်မအတွက်တော်တော်ကောင်းကောင်းကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့် Omega3ဗီတာမင်အသစ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ “ Om Omega3nutrient DHA သည် ဦး နှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်းမာသော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ” ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည့်တောင့်များသည် DHA ၁၀၇ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဆေးတောင့်ဟောင်းများတွင် ၈၅ မီလီဂရမ်နှင့် DHA ပါဝင်ပါသည်။ ခြားနားချက်ကိုသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ငါ DHA သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine ကိုပြန်လည်ထိန်းညှိရာတွင်ပါဝင်နိုင်သည်ထင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည်ငါ၏ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထိန်းချုပ်သည်။
ငါနေ့တိုင်းခြောက်လအိုမီဂါ3ငါးရေနံတောင့ယူပြီးခဲ့ကြနှင့်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ငါ၏အရက်နာလျှော့ချပါပြီ။ အတိတ်ကာလ၌,2ရက်ပေါင်းသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ငါငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်အိပ်ချင်အားနည်း, စိတ်ဓာတ်ကျ, အနိမ့်စွမ်းအင်ခံစားရတယ်။ အခုတော့လက္ခဏာများကိုလျှော့ချပါပွီ။ ငါမျိုးကိုသာသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်နေ့ကိုလျော့နည်းလုံ့လရှိသူခံစားရတယ်။
ငါမကြာသေးမီကဂျူလီယာရော့စ်၏ "The Mood Cure" ဟုခေါ်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှုခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်စိုးရိမ်စိတ်များ / စိတ်ဓာတ်ကျနေသူများနှင့် SSRI ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများကိုမည်သို့ရှာဖွေလေ့ရှိကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည် (selotonin re-uptake inhibitor) ။ ၎င်းသည်ရှည်လျားပြီးတိုတောင်းသောကာလကို SSRI ၏ပြုလုပ်မှုကြောင့်လူအချို့သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ serotonin ပမာဏကိုတိုးပွားစေသောကြောင့်ပုံမှန်အား (သို့) စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်းတို့ကိုခံစားရစေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီအများကြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကြွလာ။ သူမတွင်တိတိုဖန်၊ 5HTP၊ စိန့်ဂျွန်ဝေါ့တာ၊ L-Tyrosine နှင့် SAM-E ဖြည့်စွက်ဆေးများကို အသုံးပြု၍ ကုသမှုခံယူထားသည်။ (ဤသည်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာသောက်ရန်မရည်ရွယ်ပေ။ ) SSRI ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ပိုမိုသဘာဝကျသည့်နည်းလမ်းကို dopamine ပြုလုပ်သည်။ သူသည်ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ်များများစားစားရှိသောအစားအစာများကိုလည်းဆွေးနွေးထားသည်။ ညစ်ညမ်းသောအရိုးစွဲနေမှုတွင်အဆင့်နိမ့် serotonin ပါဝင်မှုရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းဆေးခြောက်နှင့်အရက်သေစာသောက်စားသူတစ် ဦး အနေဖြင့် serotonin နှင့်မည်သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြသနာရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှု.
အိုမီဂါ 3-6-9 ကငါ့ကိုကူညီခဲ့တယ်၊ ငါအရင် omega3 ကိုယူခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အိုမီဂါ3-6-9နဲ့ငါအတိအကျကွဲပြားမှုတစ်ခုခံစားရတယ်။ ငါ့ရဲ့လက်သည်းတွေက ridicoulus အမြန်ကြီးထွားနေတယ်။ ငါ့ဆံပင်တွေကပိုကောင်းတယ်၊ အရေပြားကပိုလို့ကောင်းတယ်၊ ငါပိုအာရုံစူးစိုက်တယ်။ ငါဖတ်တာက ဦး နှောက်နဲ့အဲဒါတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဖတ်လို့ပဲ။ ဦး နှောက်အနာရောဂါပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်သလား။ ငါမသိဘူး။ ဒါဟာအနည်းဆုံးငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။
ငါ aryuvedic ပျိုးပင်ကိုယူပြီးစတင် ashwagandha။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်စေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုချက်ချင်းတိုးတက်စေသည်။ အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသော်လည်းဤပျိုးပင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောမကောင်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမတွေ့ရသေးပါ။ ငါ PMO မရှိငါ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးငါတသမတ်တည်း ashwagandha regimen အပေါ်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သောပုံပြင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်စတင်မှုသည်အတော်လေးကောင်းမွန်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအပင်၏မည်မျှကိုမည်မျှထည့်နိုင်သည်ကိုအတိအကျမသိပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုရင်ငါဒါကိုမျှဝေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိနိုင်သည့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိသည့် ၂ လကျော်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်အဘို့အလိုငှါကြည့်ရှုချင်ကြလိမ့်မည်။ ငါအလေးအနက်ထားရမယ်, အမှားမရှိစေခြင်း, reboot ၏အခြေခံအုတ်မြစ် PMO NO ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါပျိုးပင်ကနေရတဲ့စေခြင်းငှါမဆိုအကူအညီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေပုံးတစ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးကုသမှုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းသည်မညစ်ညမ်းစေရန်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအားကူညီနိုင်ပါသလား။ မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုရရှိခဲ့သည့်အရက်သမားများသည်အရက်လျော့နည်းသည်။ ကြည့်ရှုရန်“အရက်သမားအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ကုသမှု: တစ်ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု။ "
သုံး dopamine-related ဖြည့်စွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ကြသည်။ ပထမထုတ်ကုန်တွင်သိပ္ပံပညာသည်နောက်ကွယ်တွင်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရပြီးနောက် ဦး နှောက်သစ်များပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါ့အပြင် dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ စျေးကြီးတယ် လင့်နှစ်ခုပေးထားသည်။
CDP-Choline, ဒါမှမဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်, Cognizin® Citicolinehttp: //challengeyourbrain.org/article-appetite-supression.htmlhttp: //en.wikipedia.org/wiki/Citicoline
L-tyrosine: dopamine, epinephrine နှင့် norepinephrine များအတွက်ရှေ့ပြေးကြောင်းအဆိုပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်။ ဦးနှောက် doapmine ကပြောင်းပေးပါတယ်။ အခြို့ကအနိမ့် dopamine အခြေအနေများအဘို့အထောကျအကူပွုဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အတည်ပြုပေးရန်သိပ္ပံမတွေအများကြီး။ အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့
ငါမှာ Mucuna Pruriens နှင့်အတူအချို့ဆေးပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကို ၁ ရက်မျှအသုံးပြုပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်ကွဲပြားမှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အခြေအနေကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ပြောပြနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုကသာမန်ထက်ပညာရှိတယ်လို့ခံစားရတာကအစကန ဦး ခံစားခဲ့ရတယ်။ ခံစားမှုစတင်ခဲ့သည့်အခါကကွဲပြားခြားနားသောခံစားရတယ်။ ဒီအပျော်အပါးဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုစိတ်ထိခိုက်သကဲ့သို့၊ ငါရောက်လာသောအခါပျက်ကျသွားသည်၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သုခချမ်းသာနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလုံးလုံးခံစားရသည်။ ပြီးရင်ပြီးသွားရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်။ အပျော်အပါးကခါတိုင်းလိုလောက်မကောင်းဘူး၊ အမြင့်ကပိုပြင်းထန်တယ်၊ ငါဟာစွဲလမ်းစေတဲ့အလိုဆန္ဒကိုပိုခံစားရတယ်။ ဖော်ပြရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်မှပုံမှန်ထက်အားနည်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေပြီးခဏအနားယူတယ်၊
(ရင်းမြစ် Nature ထံမှ) Relora: cortisol ပမာဏမြင့်တက်ကောင်တာကိုကူညီမလုပ်ပဲ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဖြည့်စွက်မှုနှင့်အတူဒီအကူအညီနဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချ။ ငါကိစ္စများအော်ဂဇင် post ကြသောသူတို့ (မိမိတို့၏စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်) ဒီအထောကျအကူဖွစျဖို့တွေ့ပြီကြောင်း .- B ကရှုပ်ထွေးသော, ဖြစ်ကောင်းဂြာကနေ (သူတို့ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယရှိသည်ထင်ရ) တွေ့ရှိရ - တူညီဂြာထံမှပေမယ်သာသေးငယ်တဲ့ဆေးများ (ထဲမှာ ငါ့အဘို့နေ့ရက်ကိုတစ်ချိန်က 1mg ဆေးလုံး၏4/ 200) ကလိင်စိတ်လျော့နည်းကျဆင်းခြင်းနှင့်ပုံပြင်များအဘို့ကျော့ကွင်းကိုထွက် anxiety.Check လျော့ပါးစေရန်လေ့နှင့် http ရသော serotonin တိုးမြှင့်ကူညီရသောသင်၏အ brain.- 5HTP အတွင်းစုဆောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့: //www.raysahelian .com
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည်ဆုတ်ခွာရာတွင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီခဲ့ပုံရသည်။ ငါစိမ်းလန်းသောလက်ဖက်ခြောက်ကိုသောက်နေပြီ။ (Costco's Signature အမှတ်တံဆိပ်၊ အိတ်ထဲတွင်မန္နမုန့်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ) သို့သော်လျောက်ပတ်သောအမျိုးမျိုးကလှည့်စားနိုင်သည်။
ငါကော်ဖီထွက်ခုတ်ဖြတ်။ ငါသည်နောက်ကျငါကအများကြီးမကြိုက်ဘူး, ဂျင်ဆင်းလက်ဖက်ရည်အများကြီးမသောက်ပြီ။ ဒါဟာငါ့အစိတ်ဓါတ်များဟန်ချက်ညီငါ့ကိုစွမ်းအင်ပေးကတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်သည်ဟန်သော်လည်းငါ့စိုက်ထူ (ကြောင်းကို spontanious) ပိုပြီးမကြာခဏရတဲ့နေကြသည်။
hops တစ်ဝက်ပါသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ခြောက်၊ ဦး ခေါင်းခွံတစ်ဝက်အတူတကွရောနှောထားသည့်ဆေးစွဲနေသည့်အိုစွဲလမ်းမှုအတွက်သက်သာစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် 'anaphrodisiacs' ဖြစ်သည်။ (သူတို့က libido ကိုလျှော့ချပေးတယ်။ ) ဘီယာလိုခါးသီးလွန်းလို့အားမပြင်းပါနဲ့။ သငျသညျတကယ်တော့ဘီယာ၏အရိပ်မကြိုက်ဘူးမဟုတ်လျှင်, သောအမှု၌သင်တို့ကိုငါပင်ပို။ နူးညံ့သောငါရှာတွေ့သင့်ပါတယ်ရှာပါ
ဂျင်ဆင်းနှင့်တူ Adaptogenic ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ashwaganda အမြစ်နှင့် licorice အမြစ်သင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်အလိုတော်ကိုအလုံအလောက်ဗီတာမင် C, Pantothenic အက်ဆစ် (ဗီတာမင် B-5) နှင့်ဆားအဖြစ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သူအပေါငျးတို့တ္ထုများတစ်စုံတစ်ဦးကစိတ်ဖိစီးမှု alot အောက်မှာအခါအလွန်လျော့ကျဖြစ်လာနိုင်သည့်ယင်း adrenal ဂလင်းငြိမ်းစေလျက်၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါ။
ငါ St. Johns Wort ကိုငါ့စိတ်ဓာတ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါက rebooting နဲ့ rebalancing နေတုန်းပဲငါ့ကိုအပြုသဘောဆက်ရှိနေဖို့အများကြီးပိုလွယ်ကူစေတယ်။
ငါအာဟာရဖြည့်စွက်ချက်အတော်လေးပရိတ်သတ်ပါ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ဤဆောင်းပါးကို N-Acetylcysteine ​​(N-Acetylcysteine) နှင့်တွေ့လေ့ရှိပြီး NAC ကိုအတိုချုံးထားသည်။ “ N-Acetylcysteine ​​သည်ကိုကင်းမှထုတ်လုပ်ထားသော metaplasticity ကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သည်” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2661026/
ဒါဟာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးက Porn စွဲအပေါ်သို့အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ငါ့ကိုဒဏ်ခတ်? အဆိုပါဖြည့်စွက်ကိုလည်း YBOP site ကိုမှဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည် https://www.yourbrainonporn.com/introduction-to-behavioral-addictions-2 ငါ "N-acetyl cysteine, နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular အချိုမှုအာရုံစူးစိုက်မှုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (89) ၏လေ့လာမှုတစ်ခု (90) တွင်လောင်းကစားခြင်းတိုက်တွန်းမှုများနှင့်အပြုအမူလျှော့ချနှင့်ကိုကင်းတပ်မက် (91) နှင့်ကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကိုးကားသော ကိုကင်းစွဲ၌တည်၏။ "
အဆိုပါဖြည့်စွက် N-acetylcysteine ​​အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် http://www.raysahelian.com/acetylcysteine.html ။ ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တောင်းဆိုမှုများအောင်မပါဘဲ, IMO အလွန်မျှတတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတင်ဆက်သောကွောငျ့ငါသညျဤ site ကိုချိတ်ဆက်။
ငါအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် NAC ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြု။ , တကယ်လို့ငါအအေးမိနေချိန်မှာသိပ်သည်းဆနည်းတာကိုလျှော့ချတာဟာအတော်ကောင်းတယ်။ တကယ်တော့ငါဟာအမေကိုတချို့ပေးတယ်၊ သူကစီးပွားဖြစ် decongestants တွေထက်ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်လို့သူကျိန်ဆိုတယ်။ ၎င်းသည်အသည်းကိုအလွန်အကာအကွယ်ပေးသင့်ပြီး Tylenol အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောထိန်းညှိမှုတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Prostate ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အခြားဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှထပ်ဆောင်းဖြည့်စွက်မှုကိုအကြံပြုထားသည် https://www.reuniting.info/node/10991.
NAC သည်ချွဲထုတ်လွှတ်သောဂလင်းများမှထွက်ရှိမှုများကိုကန့်သတ်ထားပုံရသည်။ ဤသည်မှာအခြားသောဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အားတားဆီးပိတ်ပင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ကူညီနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်နေသည်။ ငါဒီဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အတူရေကြောင်းသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါပုံမှန်အားဖြင့်အကြံပြုသောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 600mg ၏ဆေးများမှာပြန်သွားတော့ L-Cysteine ​​၏အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဆင်းသက်လာ။ ၎င်းကိုဤပုံစံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်ချက်အဖြစ်သာမကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ သင်ကကျန်းမာရေးဆေးဆိုင်များတွင်သင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအမြောက်အများမှကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသည် http://www.myprotein.com/uk/products/n_acetyl_l_cysteine။ ဒီပုံစံနဲ့ ၀ ယ်တာကတောင့်တွေထက်အများကြီးစျေးသက်သာတယ်။ သင်၏သောက်သုံးသောပမာဏကိုတိုင်းတာရန်အတွက်ကုမ္ပဏီအသေးများသို့မဟုတ်သေးငယ်သောအကြေးခွံများကိုသာဝယ်ယူပါ။
ဤပုံစံတွင်သဘာဝမတည်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ပုံမှန်ပရိုတိန်းစားသုံးမှုမှခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်ယူ။ မရနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အလွန်အသုံးဝင်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောလများကကဲ့သို့မကောင်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲပြုခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းကိုလအနည်းငယ်ကာလအတွင်းဆေးပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့စာဖတ်သူတွေကအဲဒါကိုမစတင်မီကိုယ့်စိတ်ကိုဖွင့်သင့်တယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်
တဦးတည်းအိမ်မှာအများကြီးကုန်ကျစရာမလိုဘဲ, ဒီ Ayurvedic Churna စေနိုင်သည်။ အခြောက်လှန်း Amalas (ငန်းသီး) ပင်တစ်ပင် Emblica officinalis ၏အသီးအပွ ယူ. အမှုန့်သို့သူတို့ကိုငါကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ အဆင်သင့်လုပ် Amala အမှုန့်ကိုလည်းဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည်။ အမှုန့် rocksugar ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူ Amala အမှုန့်များ၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရောမွှေပါ။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦး ashram မှဤအဆင်သင့်လုပ်အရောအနှောရအောင်လိမ့်မည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင်ရေတစ်ဝက်နှင့်အတူအမှုန့်တစ်နာရီတစ်ဦးဇွန်းကိုယူပါ။ ဤသည်အမှုန့်ဟာသုတ်ရည် thickens ။ ဒါဟာအစချုပ်သက်သာ။ ဒါဟာ Vata (လေ), Pitta (သည်းခြေ) နှင့် Kafa (ချွဲ) ၏ဟန်ချက် restores ။ ဒါဟာအစစိုစွတ်သောအိပ်မက် get သောသူတို့အားအကျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Self-ထိန်းချုပ်ကူညီပေးသည်အဖြစ်တောင်မှကျန်းမာလူများကယူနိုင်ပါတယ်။
18 ၏အသက်အရွယ်မှာကျွန်မဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် SAW PALMETTO ယူပြီး start ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာသဘာဝပါပဲငါမူးယစ်ဆေး propecia များအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ကြောက်သောကြောင့်ငါ Palmetto စောရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Palmetto ထူးဆန်းတဲ့ဖြည့်စွက်ဖြစ်ပါတယ်စော။ ဒါဟာ DHT သို့ testosterone ဟော်မုန်းပြောင်းလဲသောအင်ဇိုင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် DHT လျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါအရာဟာခန္ဓာကိုယ်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသည်နှင့်ကျွန်တော် palmetto အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်အခြားဘယ်အရာကိုကခန္ဓာကိုယ်မှမသိမြင်လျှင်ဘယ်လိုအတိအကျကိုသိ dont ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်း DHT သို့ testosterone ဟော်မုန်းပြောင်းလဲသောဤအင်ဇိုင်းလည်းလိုအပ်နေပါသည်အခြားအရာကိုသိ dont ။
စောအပေါ်ကိုငါ့လိင် drive ကိုတဟုန်ထိုး Palmetto အခါ။ ငါအဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုသိ dont ပေမယ့်ကိုယ့် DHT သို့ကူးပြောင်းမ bioavailable testosterone ဟော်မုန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပါပြီရပါမည်။ ငါ့ဆံပင်ကိုလည်းအများကြီးပိုထူတယ်။ သင်သည်ဤလူတို့သညျအဘို့အအိပ်မက်ဖြည့်စွက်ကြောင်းထို့နောက်အရာလို။ ငါခဏကိုပြု၏။ ပြည်သူ့ငါ့ဆံပင်ကြည့်ပြီးဘယ်လိုအထူကဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်လိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်းဤအချိန်ကာလအတွင်း porn စွဲတယ်။ မကောင်းဘူး။ ငါသည်လည်းတွေအများကြီး masturbated ။ အဆိုပါအရာ Palmetto completly နံနက်စိုက်ထူပိတ်ပစ်စောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 2-4x တစ်လ get သို့မဟုတ်ကံကောင်းလျှင်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ worrying.I PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကြောင့်စော Palmetto အပေါ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုအခါပြဿနာများစတင်ခဲ့သည်။ ငါကြွက်သားရဖို့အထိ bulking ခံခဲ့ရသည်နဲ့ကျွန်မလည်းအလွယ်တကူအဆီရဖို့သလိုပဲနှင့်ငါ့ရင်ဘတ်အရမ်း moobish သလိုပဲခဲ့သည်။ ငါထို့နောက်ဖြတ်တဲ့အစားအစာအပေါ် သွား. ခဲအလေးချိန်ချွတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမြင် palmetto သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ပုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရေ retention ကိုနှင့်အလေးချိန်အမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်လည်းသည်အခြားနှစ်ဖက်သို့ကြည့်ရှုနှင့်ကငါ့ကိုကြောက်လန်။ လွှ palmetto အဲဒီမှာအသည်းဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့်အသက်တာရှိဖျက်ဆီးခံရဟုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူတွေရှိခဲ့သည်။ Palmetto တစ်ဦးအဆိပ်အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါ2နှစ်ပေါင်းပေါ်မှာခဲ့သည်။ ရသည်မှာစော Palmetto နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုအပိုစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးအီစထိုဂျင်သို့ကူးပြောင်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ပင်အမျိုးသမီးရင်သားအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုသည်။
ငါစော Palmetto ကပြေး။ ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, ငါ့နံနက်စိုက်ထူငါ့ဆံပင်ပါးလွှာကိုထပ်တယ်ထူးဆန်းငါကြွက်သားဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါလိင် drive ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်ရောက်လာတယ်။ ငါ့စကားသံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းတယ်။ လွှ palmetto တစ် wierd ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးငါ့စကားသံကိုသည်၎င်း၏ deepness.I အများကြီးယခု 11 လအခမဲ့ Palmetto စောခဲ့ကြဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏လိင် drive ကိုဖွင့်ပါကလွှ palmetto အသုံးမပြုခင်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသောအရာကိုကြားတွင်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဒီမှာစိတ်ကူးများသေချာပေါက်မကူညီကြလိမ့်မည် သငျသညျ။ တဦးတည်းဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဆိုသည်:
ကျွန်ုပ်၏ PMO ကိုမစတင်ခင် omega-3 ဖြည့်စွက်ခြင်း (ငါးဆီတောင့်) ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာယူပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ထွန်းလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်မကူညီနိုင်ပါ။ Multivitamins, Vitamin D, Calcium နဲ့ Zinc PMO ဆေးတွေထုတ်ပေးတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်အတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ လက်ဖက်စိမ်းနှင့် tryptophan တို့လည်းမကူညီနိုင်ပါ။
Psychiatry အတွက် N-acetylcysteine: လက်ရှိကုထုံးသက်သေအထောက်အထားများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အလားအလာယန္တရားများ (2011)